Ogo, Nyocha na Buzụta Ihe | Martech Zone
Izu gara aga, enwere m obi ụtọ nke nzukọ na ikwurịta okwu Jeff Quipp nke Onye Nchọgharị Nchọpụta, ụlọ ọrụ SEO na Internet Marketing. Jeff moderated a panel on ratings, reviews na-elekọta mmadụ media na m bụ na Chọọ Expo ahia na nzukọ eMetrics na Toronto na Gil Reich, VP nke Nlekọta Ngwaahịa na Azịza.com.
Jeff welitere otu igodo - ebumnuche nke onye ọbịa ahụ, ihe anyị na-anwa ịghọta mgbe niile ka anyị na ndị ahịa na-arụ ọrụ iji bulie saịtị ha maka ọchụchọ na ntụgharị. Jeff kewara ngalaba abụọ ahụ atụle na mkpali ndị na-azụ ihe ma tụlee mmetụta nke ogo na nyocha. Nyocha na-adịghị mma nwere mmetụta dị ukwuu na omume ịzụta. Jeff kwuru banyere ọmụmụ ihe site na Lightspeed Research na 2011:
62% nke ndị ahịa na-agụ nyocha na ntanetị tupu ịzụta.
62% nke ndị na-azụ ahịa nyochara ntụkwasị obi ọzọ echiche ndị ahịa.
58% nke ndị na-azụ ahịa nyochara nkwenye ntụkwasị obi sitere n'aka ndị ha maara.
21% nke ndị na-azụ ahịa nyochara kwuru nyocha 2 na-adịghị mma gbanwere uche ha.
37% nke ndị na-azụ ahịa nyochara kwuru nyocha 3 na-adịghị mma gbanwere uche ha.
Naanị 7% nke ndị na-azụ ahịa tụgharịrị na netwọkụ mmekọrịta ha maka nyocha, ndị ọzọ tụgharịrị na saịtị tụnyere ịzụ ahịa yana search engines.
I nwere ike na-eche nke Fim na reviews dị ka ọ bụla na peeji nke ụfọdụ kpakpando na ụfọdụ na-azaghị azịza si ọrụ… ma Jeff aka ndị na-ege ntị na-eche gabiga na:
Youtube njikọ, ọkacha mmasị na nkwupụta na-emetụta ọkwa vidiyo.
Nsonaazụ azụmaahịa mpaghara na engines ọchụchọ (Bing, Google) nwere nyocha metụtara. The ọnụ ọgụgụ nke reviews, recency na ugboro ole nke reviews nwere ike mmetụta pịa-site udu. Nchọgharị ọchụchọ na - adọtịkwa ogo na nyocha site na saịtị nyocha ndị ọzọ dịka Yelp.
Nchọpụta ọchụchọ nkeonwe Google nyere gị ohere iwepu saịtị na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Nke ahụ ọ ga - emetụta ogo saịtị ma ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ kwalite ya dị ala? Enwere ike.
Ogo na nyocha abughi nsogbu na nsogbu nke ulo oru ndi na eche ihu nzaghachi na adighi nma na ntaneti. 33% nke ndị natara nzaghachi sitere na ụlọ ọrụ n'ihi nyocha na-adịghị mma tinye nyocha dị mma. 34% kpochapụrụ nyocha ha kpamkpam!
Ihe ngosi Jeff zuru oke - na-ekwu maka iji ekwentị yana usoro Google iji tinye mkparịta ụka mgbasa ozi mmekọrịta na nsonaazụ ọchụchọ. Ihe nkuzi na ọnụ ọgụgụ ndị a, n'ezie, bụ iji hụ na ị na-arụ ọrụ ịkwalite ụlọ ọrụ gị n'ịntanetị. Gwa ndi ahia gi ka ha nye ha nyocha ma gosi ha otu esi edozi ha. Zaa ma kwusi okwu ndi butere ntule na-adighi nma ka inwee ike igbanwe onodu ndi ahu.
Enweghị nyocha na nyocha ndị na-adịghị mma nwere ike ime ka onye na-achọ ịzụ ihe gbanwee. Lekwasị anya na saịtị gị ma nyochaa aha gị na ọkwa na saịtị nyocha. Ha ga-emetụta omume ịzụta.
Tags: 2011azịza.comozu ahia nzubegil reichjeff nkpuNyochaa ọkụNtụleọkwa na nyochaNyocha
Ọdịnaya Nke mbụ
Mee 6, 2011 na 2: 44 AM
N’oge na-adịbeghị anya, enwetara m email site na azụmahịa ịrụzi akpaaka m na-eji. Obere, otu ebe azụmaahịa bidoro iji ahịa ịntanetị. Ha na-enye $ 10 coupon maka nrụzi n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na m ga-eziga nyocha banyere ọrụ ọrụ m na nso nso a na ha. Onyinye ahụ bịara n'oge, na-erughị otu izu mgbe ha gachara eleta. Ọ bụ naanị otu onyinye, echekwara m ụzọ dị mma isi mee ka m gafeta na saịtị ha.